Qalabka Codsiga ee Abaalmarinta Aqoonyahannada McKnight waxaa la heli karaa Agoosto / Sebtember sanad walba. Codsadeyaashu waa inay muujiyaan xiisaha loo qabo xallinta dhibaatooyinka muhiimka ah ee aagagga la xiriira ee neerfaha.
Si loo dalbado, baaraha guud wuxuu u baahan doonaa inuu raaco talaabooyinkan:
Soo degso dukumintiga "Codsiga iyo Tilmaamaha" oo ku yaal dhinaca midig ee dhinaca. Tilmaamahaani waxay bixin doonaan faahfaahin dheeraad ah oo laxiriirta talaabooyinka hoos kuqoran. Fadlan tixraac dukumintiga tilmaamaha oo dhan.
Samee isticmaale iyo erey-fure sirta ah adiga oo adeegsanaya iskuxirka “Start Application” oo ku yaal geeska midig.
(fadlan hayso magacaaga iyo isgarad-ereygaaga si aad u isticmaasho mustaqbalka)
Markii aad soo gashid, buuxi waraaqda wejiga tooska ah ee internetka.
U xaree dhamaan codsiyada sidii ONE PDF, oo ay ku jiraan:
Warqada weelka oo dhammeystiran.
Sawirka shaxanka ee qaabka NIH.
Sharaxaadda mashruuca cilmi baarista ee la soo jeediyey. Codsadeyaashu waa inay soo bandhigaan tijaabooyin ku saleysan shaqadooda ugu fiican. Soo-jeedinta waa in lagu soo bandhigaa mid aan la taaban karin oo ah 200 oo erey ama wax ka yar, oo ay ku xigto bayaan faahfaahsan oo ku saabsan qorshooyinka barnaamijka cilmi baarista ee saddexda sano ah. Cilmi baarista la soo jeediyay uma baahna inay soo bandhigto xariiq cusub oo cilmi baaris ah, laakiin ma ahan inay la mid noqoto mashaariicda ay taageerayaan maalgeliyeyaasha kale. Soo jeedinta (aan la taaban karin, sheeko iyo tirooyin, laakiin ma aha buug-gacmeedka) waa inaysan ka badnaan lix liis oo nambarro ah, oo hal-dheeri ah, oo ku jira farta 12-gees leh oo leh hal-inji dheeri ah.
Miisaaniyadda la soo jeediyay. Codsaduhu waa inuu muujiyaa sida isaga / iyadu / iyadu ay u soo jeedinayaan in loo isticmaalo lacagaha abaalmarinta McKnight Scholar ($225,000 oo lagu bixiyo qaybo isku mid ah $75,000 ee 2021, 2022, iyo 2023). Waxyaabaha miisaaniyadda la oggol yahay waxaa ka mid ah mushaaraadka iyo faa'iidooyinka geeska, qalabka, sahayda, kharashka xayawaanka, kharashka adeegyada farsamada, iwm. Codsiga waa inuu ku jiraa miisaaniyado la soo qoondeeyay sannad kasta, iyadoo lagu jaangoynayo tirooyinka shaxda / lacagta dollarka ah; miisaaniyadaha sheekada lama aqbali karo. Miisaaniyaadka looma isticmaali karo kharashyada dheeraadka ah ama kuwa aan tooska ahayn.
Liiska Maalgalinta Firfircoon iyo Joogtada ah (kharashka tooska ah ee sanadlaha ah shaybaarka).
Bayaanka sarkaalka maaliyadeed mas'uul ka ah hay'adda kafaala qaadeysa.
Taageerida macluumaadka ka yimid codsadaha gudoomiyaha gudiga ee kafaalaqaada machadka.
Shan qoraal oo kooban.
Afar tixraac oo ka imanaya macalimiin hore, kormeerayaal, ama shaqaale sare oo aqoon u leh shaqada codsadaha. Waraaqaha tixraaca waa in si gaar ah loogu diraa isla markaana kalsooni ay ku qabaan afarta qof ee ku taxan tixraacyada xaashida wejiga ee dalabka.
The Guddiga Dib-u-eegida ee McKnight Scholar (in la cusbooneysiiyo Fall 2020) ayaa qiimeyn doonta codsiyada oo xuli doona tiro kooban oo codsadayaal ah oo la wareysan doono. Codsadeyaasha waxaa la ogeysiin doonaa dhamaadka bisha Maarso wareysigana waxaa loo qorsheeyay Khamiista, Abriil 22 magaalada New York.
Guddiga wuxuu kula taliyaa musharixiinta Golaha Maamulka ee Sanduuqa Dhaqaalaha si loo gaaro go'aanka ugu dambeeya. Abaalmarinta waxaa lagu dhawaaqi doonaa dhammaadka Maajo 2021.
Tartankan, illaa lix Aqoonyahanno McKnight ah ayaa loo xulan doonaa inay helaan saddex sano oo taageero ah, laga bilaabo Julaay 1, 2021.
Musharax loogu talagalay Abaalmarinta Aqoonyahanka McKnight waa inuu u shaqeeyaa sidii baare madax-bannaan oo ka tirsan machad cilmi-baaris oo aan faa'iido doon ahayn oo ku yaal Mareykanka, waana inuu heystaa boos macallinimo oo ah darajada Kaaliyaha Professor, waana inuu ku soo shaqeeyey darajadaas wax ka yar afar sano waqtiga kama-dambeysta ah ee arjiga. Kuwa haysta cinwaanada kale sida Kaaliyaha Cilmi-baarista ee Kaaliyaha, Adjunct Kaaliyaha Professor, Professor Research Track, Professor Booqasho ama Macallin xaq uma laha, iyo waqtiga lagu qaatay adeegga darajooyinkaas ayaan lagu xisaabtamin afarta sano ee adeegga ee go'aaminta u-qalmitaanka. Haddii hay'adda martida loo yahay aysan isticmaalin cinwaanno aqoon-isweydaarsi, warqad ka socota sarkaal sare oo ka tirsan hay'adda (tusaale ahaan, Dean ama Agaasimaha Cilmi-baarista) waa inuu xaqiijiyaa in codsaduhu leeyahay / keyd u gaar ah ilaha hay'adeed, sheybaarka, iyo / ama tas-hiilaadka.
Musharraxu ma qaban karo abaalmarin kale oo ka socota Sanduuqa McKnight Endowment Fund for Neuroscience kaas oo ku habboonaa wakhtiga abaalmarinta Aqoonyahanka. Musharax ma dalban karo wax ka badan laba wareeg oo tartan ah Abaalmarinta Aqoonyahan.
Qaddarka iyo Ujeedada Taageerada
Codsiga iyo Tilmaamaha
Nidaamka codsigu waa gebi ahaanba internetka. Riix hoose si aad u hesho foomka codsiga.
Codsiga oo ku eg Janaayo 4, 2021